यसको उपचार कसरी गर्ने? - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
म २० बषिर्या अविबाहित विद्यार्थी हु। मेरो महिनावारी नियमित रुपमा २८-२८ दिनमा हुन्थ्यो। महिनावारीको समयमा धेरै दुख्ने तथा धेरै रगत जाने पनि छैन। तर अहिले बिगत २ महिना देखि महिनावारी ३०-३० दिनमा हुन्छ। यस्तो किन भएको हो? यसको उपचार कसरी गर्ने?
महिना महिना दिनको अन्तरमा हुने रगतश्राव नै महिनावारी हो र समान्यतयाः यो २१ दिन देखि ३५ दिनको अन्तरमा ३ देखि ५ दिन वा ७ दिन सम्म हुन्छ। पहिलो दिन कम रगत गए पनि दोस्रो-तेस्रो दिन ८० मिलिग्राम सम्म रगत खेर जान सक्छ अर्थात ३-४ वटा प्याड फेर्नु पर्ने हुन सक्छ। महिनावारीको समयमा अलिअलि दुख्ने पनि हुन्छ। तपाईको महिनावारी ३० दिनमा अर्थात ३५ दिन भित्र नै भएको, धेरै दुख्ने तथा धेरै रगत जाने नभएकोले यसलाई समस्या भन्न मिल्दैन। यो महिनावारीको समान्य अवस्था हो र यसलाई कुनै उपचार चाहिदैन।